Kismaayo News » Xabadka ayay isku salaameey
Xabadka ayay isku salaameey
Kn: Guushu macaan badanaa, gardaradu qaraaraa, siyaasadu gabi dhacleyn badanaa?
Halkan waxaa ka muuqda gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari iyo Madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xabadka isku salaamaya, iyada oo farxad ay haraysay wajiyadooda.
Jawaari waxa uu ahaa musharixii uu watay madaxweynaha, islamarkaasina taageersanaa in uu ku guuleysto xilka gudoonka baarlamaanka.
Inkasta oo xildhinaada ay yihiin kuwa codkooda kusoo dooranaya madaxweynaha imanaya, hadane gudoonka Baarlamaanka waa udub dhexaadka qofta ay tahay in madaxweyne loo doorto.
Xubin kasta oo baarlamaanka ka tirsan waxa uu aad ugu tashanayaa in uu xulafo la noqdo ama saaxiib la noqdo gudoonka si uusan u seegin ka mid noqashada hogaanka gudiyada baarlamaanka, waftiyada baarlamaanka, siminaarada iyo faa’iidooyinka kale ee badan ee imanaya, sidaasi darteed waxa ay inta badan u dhago nugulyihiin hadalka gudoomiyaha.
Kulanka labada nin kadib, war saxaafadeed kasoo baxay ayaa u dhignaa sidan;
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa u hambalyeey guddoonka cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya isagoo dhinaca kale tallaabo taariikhi ah ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay 42 sano kaddib ku guuleystaan inay baarlamaan ku doortaan waddankooda.